Ololaha doorasha South Africa oo la gabagabeeyay - BBC News Somali
Ololaha doorasha South Africa oo la gabagabeeyay
5 Maajo 2014
Image caption Waxaa haatan 20 sano laga soo wareegay markii la doortay Nelson Mandela
Axsaabta siyaasadda ee Koonfur Afrika, ayaa maanta soo gebagabeeyay ololaha doorashada 5-aad ee dalkaasi ka dhici doonto maalinta Arbacada ah.
Xisbiga talada Koonfur Afrika haya ee African National Congress (ANC), ayaa xafladda gebagebada ololaha doorashada kusoo xiray garoonka ciyaaraha ee FNB oo ku yaalla Johannesburg, waxaana halkaa taageerayaasha xisbiga khudbad uga jeediyay Madaxweyne Jacob Zuma.
Tobanaan kun oo taageerayaal ah, oo ku lebisnaa dhar lagu soo xardhay midabada jaallaha iyo dahabka, ayaa waxa ay isugu soo aruureen garoonka kubadda cagta ee FNB Studium ee magaalada Johannesburg, ee ku caan baxay Soccer City, ee lagu qabtay kama dambeysta ciyaarihii adduunka ee 2010-kii.
Qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga African National Congress (ANC), ayaa intooda badan waxay habeenkii ka horreeyay xafladda seexdeen banaanka hore ee garoonka.
Xisbiga talada haya ee ANC, ayaa la daalaa dhacayay in uu wax ka qabto shaqo la’aanta iyo musuqmaasuqa, sidaasoo ay tahayna xisbigu weli waxa uu ku naaloonayaa taageero xooggan oo uu ka haysto taageerayaal daacad u ah.
Image caption Madaxweyne Zuma ayaa sheegay in xisbigiisu, ANC, uu sii wadi doono siyaasadda dhaqaale
Isu soo baxan oo ahaa kii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada ayaa Madaxweyne Jacob Zuma, waxa uu ballan qaaday in uu sii wadi doono horrumarrada uu ka sameeyay, waxbarashada, caafimaadka, guriyeynta, iyo in uu wax ka qabto dhaqaalaha dalka.
Waxaa kale oo uu sheegay in uu diyaar u yahay in Koonfur Afrika uu horay u wado.
Zuma, ayaa ku faanay, in Koonfur Afrikada maanta ay ka wanaagsan tahay middii 1994-tii waa xilligii ay ka guulaysteen midab kala soocii, wuxuuse uga mahadceliyay dadkii soo gaarsiiyay heerkan Koonfur Afrika, isagoo amaanay siyaasadihii iyo barnaamijkii ANC.
Dhanka kale magaalada Pretoria, xisbiga Economic Freedom Fighters (EFF) ee uu hogaamiyo gudoomiyihii hore garabka dhalinyarada ee xisbiga ANC, Julius Malema, ayaa sidoo kale qabtay isu soo bixii ugu dambeeyay.
Malema, ayaa u sheegay taageerayaashiisa in la gaaray waqtigii ay u coddeyn lahaayeen xisbiyada kale intii ay u coddeyn lahaayeen ANC.
Wuxuuna sheegay in haddii uu xisbigiisa ku guulaysto doorashada uu wax ka qaban doono shaqa la’aanta sii badaneysa.
Maalin ka hor, ayaa hogaamiyaha xisbiga ay u badan yihiin dadka cadaanka ah ee Democratic Alliance (DA), ee uu xisbigeedu doorashadii gobolka western cape ku guulaystay 2009-kiii, ayaa ku faantay sida ay wax badan uga badashay gobolkaasi, waxa ayna iswaydiisay sababta auu xisbiga ANC u doonayo in marwalba la doorto.
Sikastaba, kooxaha mucaaradka ee bidixda iyo bartamaha, ayaa si tartartiib tartiib ah saameyn ugu yeelanayo gudaha dalka, balse xisbiga haysta aqlabiyadda dadweynaha ee ANC, ayaa xog uruurin la sameeyay waxa ay tilmaamaysaa in xisbiga ANC uu heli doono boqolkiiba 63 doorashada maalinta Arbacada ah.
Maqal Ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay Koonfur Afrika
Sawirro Sawirro taariikhdii Mandela